Uluhlu lwe-Samsung Galaxy M kungekudala luza kuthengisa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwezi veki zidlulileyo, besele sithethile ngento yokuba Isamsung isebenza kuhlaziyo lweendawo zayo. Inkampani yaseKorea inenjongo yokususa ezinye zeendawo zeefowuni, esele siqokelele kweli nqaku, kwaye ezintsha kulindeleke ukuba zifike kwimarike kungekudala. Olunye udidi olutsha yi-Galaxy M.
Olu luhlu lwe-Samsung Galaxy M luya kumiselwa phakathi kwinqanaba lentengiso. Kwaye kubonakala ngathi ukumiliselwa kwayo kuya kusondela ngokusondela ngokukodwa ukusuka SamMobile. Kukho namagama okuqala eemodeli ezintsha kolu luhlu lweefowuni.
Umzali umzali amagama ezi modeli aya kuba yi-Galaxy M20 kunye neGalaxy M30. Kuyaziwa ukuba eyokuqala yayiza kufika nge-32 kunye ne-64 GB yokugcinwa kwangaphakathi kwaye eyesibini ibe ne-64 kunye ne-128 GB yokugcina. Kodwa kuphela kweenkcukacha eziye zavuza malunga neefowuni ezintsha ze-Samsung.
Ngelishwa, azikho iinkcukacha ezininzi zekhonkrithi ekusungulweni kolu luhlu lutsha lweefowuni zeSamsung. Yonke into ibonisa ukuba iza kuphehlelelwa ngo-2019, mhlawumbi ekuqaleni konyaka, ukuba kuyabhengezwa ukuba izakufika kungekudala ezivenkileni, ngokweengxelo esele zifikile kuthi.
Umbono kukuba Isamsung izakususa i-Galaxy J, i-Galaxy On kunye ne-Galaxy C, ezinikezelwe kwiimodeli ezisezantsi, ezinje ngoku kuboniswa kutshanje I-Galaxy J4 Core. Luluphi utshintsho olukhulu kwinkampani yaseKorea, kwaye kuya kufuneka abasebenzisi bayisebenzise.
Ngokuqinisekileyo oko kungekudala siza kufumana ulwazi oluthe kratya malunga nolu luhlu lutsha lweefowuni ezivela kwinkampani yaseKorea. Kuba olu tshintsho luzakwaziswa kulo nyaka uzayo. Utshintsho olukhulu luza kwinqanaba eliphakathi le-Samsung. Ucinga ntoni ngolu tshintsho lwegama laseKorea?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung isungule uluhlu lweefowuni zeGlass M kungekudala
Ungaluthintela njani uhlaziyo lweVenkile yokudlala ekuchitheni idatha yedatha
Indlela yokuvula okanye ukucima i-spell checker kwi-Android